Pixel Space Kill: Jedi Escape Cheats&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
Pixel Space Kill: Jedi Escape Cheats&Hack
အားဖြင့် အက်မင် | ဇန်နဝါရီလ 13, 2022
“Pixel Space Kill: Jedi လွတ်မြောက်ခြင်း။” Action Barrage Shooting ပါဝင်သည့် မိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် အက်ရှင်သေနတ်ပစ်ခြင်းနှင့် ဗျူဟာမြောက် ဇာတ်ကောင်ကြီးထွားမှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။, တိုက်ပွဲတွင် အလွန်လန်းဆန်းစေသော ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးပါ။.
“Pixel Space Kill: Jedi လွတ်မြောက်ခြင်း။” ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မြေပုံများရှိသည်။, ကစားသမားများကို ပိုမိုစိန်ခေါ်သော ပစ်မှတ်များကို ပေးသည်။. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ၎င်းသည် အဆင့်အတွင်း မဟာဗျူဟာတိုးတက်မှုနှင့် ကိုက်ညီမှုပေါင်းစပ်မှုကို အားကောင်းစေခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။, ပြီးတော့ ကစားသမားတွေကို မီးမောင်းထိုးပြတယ်။’ တိုးတက်မှုဗျူဟာရွေးချယ်မှုများ. စွမ်းရည်တိုးတက်မှုနှင့် ဂိမ်းရှိကစားသမားများ၏ ပေါင်းစပ်မှုသည် ရလဒ်များတွင် ကြီးမားသောကွာခြားချက်များကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။. စွမ်းရည်တိုးတက်မှုသည် ဂိမ်း၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည်။, ကစားသမားတွေကို ဗျူဟာမြောက် ကစားနိုင်စွမ်း ပိုပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဇာတ်ကောင်များကိုလည်ပတ်ပါ။, ထောင်များကိုစူးစမ်းပါ။, နှင့် ဘီလူးငယ် အမျိုးမျိုးတို့ကို အနိုင်ယူပါ။
ချောမွေ့သောလုပ်ဆောင်ချက်, ပစ်သတ်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။, သင့်အား လန်းဆန်းသောဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို ယူဆောင်လာပါ။
မိတ်ဖက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း, အဆင့်စွန့်စားမှု, တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်။
Pixel ထောင်, ဆိုက်ဘာပန့်ခ်, အခြားကမ္ဘာတစ်ခုတွင် ထူးခြားသောစွန့်စားမှုတစ်ခု
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Escape, Jedi, Kill, Pixel, အာကာသ
← အလင်းပျောက် – လှိုင်သာယာ&Hack Pantheons အဖွဲ့ချုပ် – လှိုင်သာယာ&Hack →